10% mepere emepe Manufacturers & Suppliers - China 10% Openness Factory
Anyanwụ anyanwụ akwa
Ọ bụrụ na ịma mma bụ naanị maka elu, ọ nwere ike ime ka anya nwee obi ụtọ, ma ọ bụrụ na mma nwere ike gbasaa site n'ime, ọ nwere ike ime ka mkpụrụ obi nwee obi ụtọ, ị maara ndụ, m makwaara gị.
Ihe mkpuchi dị ala bụ otu akụkụ nke ihe dị mkpa dị nro na ụlọ ọhụrụ. Ha bụ ndị dị oké mkpa na ndụ ụlọ, ime, sofa, wdg. Ha nwere nnukwu mmetụta na mkpokọta ụlọ mma utịp.
Formaldehyde na Amonia nwere agba
Shadedị ndo dị iche iche na-enwetakarị mgbochi shrinkage, mgbochi mkpochapu, mgbochi ndọlị na ọgwụgwọ agba agba n'oge dyeing na mmecha. N'ozuzu, achọrọ mmeghachi omume njikọta, na formaldehyde bụ ihe eji eme ihe na-ejikọ obe.
N'ihi ezughị ezu nke njikọta njikọta, formaldehyde nke na-esonyeghị na mmegharị njikọ njikọta ma ọ bụ formaldehyde nke hydrolysis mepụtara ga-ewepụta site na akwa anwụ, nke ga-eme ka iwe dị ike nke mucosa akụkụ iku ume, akpụkpọ na anya, na-akpata mbufụt , ọbụna na-ebute nfụkasị na ọrịa kansa.
Yi HDPE mgbochi UV Foldable Window Sunscreen Roller Blinds Sun Shade Mesh
Ihe nkedo na-ekpuchi
Kedu ka esi eme icho mma ulo? Ọtụtụ ndị fọrọ nke nta ka ha chachaa isi nkwọcha ha n'ihi ịchọ ụlọ ha mma. Ha ga-eche echiche banyere otu esi etinye akwụkwọ mpempe akwụkwọ, otu esi eji akwa ụlọ ihi ụra, otu esi dabaa ákwà mgbochi na sofas. Taa, anyị ga-ewetara gị njegharị agba nke dabara na ákwà mgbochi, igbe na sofas!
Sofa na ákwà mgbochi, dị ka nnukwu ihe abụọ dị nro dị n'ime ime ụlọ ezinụlọ, ogo nke mkpokọta ha, ogo nke ihe ọhụụ metụtara metụtara ịma mma nke gburugburu ebe obibi. Ka anyị kwuo banyere ya!